IXiaomi Mi MIX Alpha iya kwenziwa ngezixhobo zepremiyamu | I-Androidsis
IXiaomi Mi MIX Alpha iya kusebenzisa izixhobo zepremiyamu
Kule veki sinako yazi ifowuni enomdla njengeXiaomi Mi MIX Alpha. Yifowuni eya kuba nescreen esikrwada kakhulu emhlabeni, njengoko kubhengeziwe kule veki. Isixhobo esiza kuza noyilo lotshintsho, ngaphandle kwamathandabuzo oluya kunika lukhulu ekuthetheni ngalo malunga noku. NgoLwesibini izakuba semthethweni.
Zimbalwa iinkcukacha ezaziwayo malunga nokuchazwa kwale fowuni, nangona yonke into ibonisa ukuba iya kuba sisiphelo esiphakamileyo. Ukuba sijonga izinto ukuba uphawu lwaseTshayina luzakusebenzisa kuyo, kubonakala ngathi sinokuqinisekisa ngaphandle koloyiko ukuba le Xiaomi Mi MIX Alpha izakuba sisiphelo esiphakamileyo.
Ngokusekwe kumfanekiso osele ulayishiwe, uyayibona loo nto iXiaomi Mi MIX Alpha iya kusebenzisa i-titanium, i-silicon kunye alumina kuyo. Okanye ke yile nto inkampani ibonakalise ngayo kwifoto. Ke isixhobo siza kwenza izinto zepremiyamu, eyinto ekufuneka iqatshelwe kwixabiso laso.
Ngomnxeba, zonke iintlobo zamarhe zifika kwiiyure zokugqibela. Kukho intetho yokuba iya kuba nomyinge we-100% womzimba ukuya kwiscreen. Ke i isikrini siza kuhlala kwi-100% ngaphambili kweso sixhobo. Ukongeza, yonke into icingelwa uyilo olunokubakho.
Ngaphandle kwamathandabuzo, iXiaomi Mi MIX Alpha ithembisa ukuba yi isimanga kunye nefowuni entsha, zenzelwe ukuvelisa zonke iintlobo zezimvo. Nangona inyani kukuba iinkcukacha ezincinci ziyaziwa malunga nale modeli, nto leyo ebangela amahemuhemu nangakumbi kunye nolindelo olukhulu ngoLwesibini.
Ke kuya kufuneka linda kancinci ngaphezulu kweeyure ezingama-24 ukudibana ngokusemthethweni le Xiaomi Mi MIX Alpha. Ukuba kukho ezinye iindaba, okanye ngaphezulu kuyaziwa malunga noyilo lwayo, siza kukuxelela. Ukuba akukho nto intsha, ngomso siya kuba nakho ukwazi yonke into malunga nesi sixhobo sophawu lwaseTshayina.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IXiaomi Mi MIX Alpha iya kusebenzisa izixhobo zepremiyamu
Kakhulu !!! Phambili ngetekhnoloji kwinkonzo yabantu
IHuawei inokongeza iiGoogle zokusebenza kwi-Mate 30 ukuba ibhlade liyaphela
Oppo K5: zonke ezi zinto zichaziweyo kubuchwephesha obuchaziweyo